Badminton – « Mada Double »: mpandray anjara 86 mianadahy andrasana | NewsMada
Badminton – « Mada Double »: mpandray anjara 86 mianadahy andrasana
Hanomboka rahampitso, etsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano, ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara, taranja badminton, ho an’olon-droa. Mpandray anjara eo amin’ny 86 eo no andrasana amin’ity fifaninanana farany ho an’ny taom-pikatrohana 2019 ity, raha ny nambaran’ny filohan’ny federasiona malagasy ny badminton, Ravalison Jean Aimé. Nambarany ihany koa fa ho avy avokoa ny ligy rehetra izay efa misy ny tonga eto an-drenivohitra hiatrika ity fifaninanam-pirenena ity.
Hizara sokajy roa dia « Série A » sy « Série B » ireo mpilalao, hahitana ny « Double dames », « Double hommes » ary ny « mixte ». Fotoana hanaovana ala vela amin’io satria maro ireo mpilalao tsy nandray anjara tamin’ny fifaninanana ho an’olon-tokana, ka vonona haka fandresena amin’ity fifaninanana ho an’olon-droa ity. Mpilalao isan’ny tsy nilalao, ohatra, i Aina izay vao avy niova klioba noho ny olana nisy teo amin’ny klioba teo aloha nisy azy, ka tsy afaka nandray anjara ny volana desambra lasa teo. Nambarany fa tsy maintsy mahazo fandresena izy amin’ity, lava rahateo ny fotoana nahafahany nanoman-tena ka manana herijika betsaka mihoatra amin’ny mpilalao hafa izy.
Araka ny fandaharam-potoana, hotanterahina ny asabotsy tontolo andro sy ny alahady maraina ny fifanintsanana. Ny alahady amin’ny 11 ora kosa no hanomboka ny lalao famaranana ka hifanesy hifaninana amin’izany ny tafakatra famaranana ho an’ny « Série A » sy « Série B ». Toy ny mahazatra, hisy ny fanolorana medaly sy amboara ho an’ny mpandresy, izay nanasan’ny federasiona ireo olo-manan-kaja eo anivon’ny ministeran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena sy ny komity olympika malagasy.
Tohin’ny fandaharam-potoana, ny « tournoi d’ouverture » no hatao manaraka, ny volana febroary izao, manaraka izany ny lalao fanao isan-taona karakarain’ny federasiona ary hiafara amin’ny fifaninanam-pirenena 2020 ny volana desambra.